Genesisi 39 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Josefa mumba maPotifari (1-6)
Josefa anoramba kurara nemudzimai waPotifari (7-20)
Josefa anoiswa mujeri (21-23)
39 Josefa akabva aendeswa kuIjipiti,+ uye mumwe muIjipiti ainzi Potifari,+ mukuru mumuzinda waFarao uye mukuru wevarindi, akamutenga kuvaIshmaeri+ vakanga vaenda naye ikoko. 2 Asi Jehovha aiva naJosefa.+ Izvi zvakaita kuti abudirire uye akagadzwa kuti atungamirire mabasa aiitwa mumba matenzi wake, muIjipiti. 3 Tenzi wake akaona kuti Jehovha akanga ainaye uye kuti Jehovha akanga achiita kuti zvese zvaaiita zvibudirire. 4 Josefa akaramba achinzwirwa nyasha natenzi wake, uye akava mushandi wake wepedyo. Saka akamugadza kuti atungamirire zvese zvaiitwa mumba make, uye akaisa zvinhu zvake zvese mumaoko ake. 5 Kubvira paakamugadza kuti atungamirire zvese zvaiitwa mumba make uye zvinhu zvake zvese, Jehovha akaramba achikomborera imba yemuIjipiti wacho nekuda kwaJosefa, uye chikomborero chaJehovha chakava pazvese zvaaiva nazvo mumba nemumunda.+ 6 Akazopedzisira aisa zvinhu zvake zvese mumaoko aJosefa, uye akanga asisazvinetsi nezvimwe zvinhu kunze kwezvekudya zvaaidya. Uyezve, Josefa akava nechimiro chakanaka nechiso chakanaka. 7 Zvakazoitika ndezvekuti mudzimai watenzi wake akatanga kuchiva Josefa achimuti: “Rara neni.” 8 Asi akaramba uye akati kumudzimai watenzi wake: “Tenzi wangu haazivi zvandiinazvo mumba, uye zvinhu zvake zvese akazviisa mumaoko mangu. 9 Hapana mukuru kwandiri mumba muno, uye hapana kana chaakandirambidza kunze kwenyu, nekuti muri mudzimai wake. Saka ndingaitirei chivi chakakura kudaro ndichitadzira Mwari?”+ 10 Saka zuva rega rega mukadzi wacho aitaura naye, asi Josefa airamba zvachose kurara naye kana kusara ainaye. 11 Asi mumwe musi Josefa paakapinda mumba kuti aite basa rake, vashandi vese vemumba macho vakanga vasimo. 12 Mukadzi wacho akabva amubata nguo yake achiti: “Rara neni!” Asi iye akasiya nguo yake muruoko rwake, akatizira panze. 13 Paakangoona kuti akanga asiya nguo yake muruoko rwake ndokutizira panze, 14 akatanga kushevedzera kuvarume veimba yake akati kwavari: “Onai! Akatiunzira muHebheru uyu kuti atiite chiseko. Auya kwandiri achida kurara neni, ndikabva ndaridza mhere. 15 Paangonzwa ndava kuridza mhere, abva asiya nguo yake pandanga ndiri akatizira panze.” 16 Pashure paizvozvo akaisa nguo yacho pedyo naye kusvikira tenzi waJosefa adzoka kumba. 17 Akabva amuudza zvaakanga ambotaura, achiti: “Muranda wechiHebheru wawakatiunzira auya kwandiri kuti andiite chiseko. 18 Asi pandangoridza mhere, abva asiya nguo yake pandanga ndiri akatizira panze.” 19 Tenzi wake paakangonzwa mudzimai wake achitaura kuti: “Izvi ndizvo zvandaitirwa nemuranda wako,” akaviruka nehasha. 20 Saka tenzi waJosefa akamutora akamuisa mujeri, maichengeterwa vasungwa vamambo, uye akaramba ari imomo.+ 21 Asi Jehovha akaramba aina Josefa uye akaramba achimuratidza rudo rusingachinji achiita kuti anzwirwe nyasha nemukuru mukuru wejeri.+ 22 Saka mukuru mukuru wejeri akaisa vasungwa vese vaiva mujeri mumaoko aJosefa, uye ndiye aiona kuti zvese zvaifanira kuitwa imomo zvaitwa.+ 23 Mukuru mukuru wejeri akanga asisina kana zvaaiita. Zvinhu zvese zvakanga zvava mumaoko aJosefa, nekuti Jehovha akanga ainaye uye Jehovha aiita kuti zvese zvaaiita zvibudirire.+